Nagu saabsan - Hebei SUREZEN Products Protective Medical Co., Ltd.
Hordhac Kooban ee Shirkadda Waxsoosaarka Caafimaadka ee Hebei Surezen
Hebei SUREZEN Products Limited Company Protective Products Limited waxaa la aasaasay 2015 July iyada oo laga diiwaan galiyay hanti dhan RMB 50 milyan. Waxay inta badan ku hawlan tahay cilmi-baarista iyo horumarinta, soo-saarka iyo iibinta qalab caafimaad oo kala duwan, oo ay ku jiraan dharka go'doominta, goonnada ilaalinta, daboolka kabaha difaaca, daboolka gacmaha, aaladaha ilaalinta iyo alaabada kale ee caafimaadka. Alaabtayadu waxay ku habboon yihiin adeegsiga caafimaad meelo kala duwan waxayna awood u leeyihiin inay siiyaan difaac adag shaqaalaha caafimaadka.
Xafiiskeennu wuxuu ku yaal Degmada Chang'an ee Shijiazhuang City, Gobolka Hebei, Shiinaha. Warshaddeena waxay kuxirantahay 6000 m2 oo leh in kabadan 260 shaqaale xirfad leh, wax soo saarkeena maalinlaha ah wuxuu gaari karaa toban kun oo ah alaabooyin khuseeya. Waxaan haynaa tiro badan oo mishiinno jaango'an ah oo loogu talagalay in lagu waafajiyo shuruudaha macaamiisheena. Dhanka kale, shirkadeenu waxay heshay shahaadooyin kala duwan, sida ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 iwm.
Suuqyadeena bartilmaameedka waxaa ka mid ah Aasiya, Midowga Yurub, Bariga Dhexe, Koonfurta Ameerika, Afrika iyo wixii la mid ah. Badeecadeenu waxay ka diiwaangashan tahay Wasaaradda Nadaafadda, Daryeelka iyo Isboortiga ee Nederland, waxayna heshay warbixintii imtixaanka ee SGS.
Intii lagu gudajiray cudurkan faafa, waxaan tabarucaad u sameynay isbitaalada maxaliga ah, iskuulada, garoonka diyaaradaha iyo waaxaha adeega bulshada, sidoo kale waxaan ugu deeqnay Talyaaniga, Japan, Malaysia iyo dalal kale si ay uga caawiyaan aduunka la dagaalanka covid-19. Waxaan ka helnay qoraal mahad celin ah duqa magaalada Parma, Talyaaniga.
"Raadinta Hal-abuurnimo iyo Dabagalka Qofnimada" had iyo jeer waa mabda'ayada qaabeynta. "Adoo xoogga saaraya tayada iyo keenista, ilaalinta kalsoonida sare" waa ujeedkeena adeeg. Waxaan leenahay mashiinno tolmo wanaagsan oo isku daraya farsamooyinka soo jireenka ah iyo kuwa horumarsan, shaqaale khibrad iyo xirfadba leh iyo xakameyn tayo leh oo adag, sidaa darteed tayada iyo waxsoosaarka wax soo saarka si tartiib tartiib ah ayaa loo hagaajiyay. Sumcad wanaagsan iyo macaamiil ku tiirsanaan ayaa la kasbaday. Waxaan nahay dad daacad ah oo hal abuur leh si aan u raadino kaamil weyn iyo horumar labada dhinac ah!